Google Adwords: Keydso laba doollar ... | Martech Zone
Khamiis, Juun 5, 2007 Sabti, Febraayo 4, 2017 Douglas Karr
Maalmo ka hor ayaan la yaabay markaan ku arkay xayaysiiskeyga Adwords boggeyga gaarka ah. Waxay ila tahay caqli xumo aniga in Google Adwords uusan si otomaatig ah u shaandheynin magaca dhabta ah ee xayeysiintu tilmaamayso.
Marka - haddii aad rabto inaad kaydsato laba lacag oo aanad haysan dad gujiya xayeysiiskaaga si aad u timaaddo bartaada oo ay ku dhici doonaan HORTA, ha xasuusto inaad ku darto boggaaga xayeysiinta xayeysiiska ee Google Adsense.
Waa Luulyo 4th: Taageer Xoriyadda Blogging-ka Mareykanka
Jul 5, 2007 markay ahayd 10:29 AM
Hadda waxaan bilaabay inaan ku sameeyo Google AdWords shaqada. Ma jiraan buugaag wanaagsan oo mawduuca ku saabsan oo aad kugula talin karto? Mahadsanid.
Jul 5, 2007 markay ahayd 11:13 AM
Ma hubo - laakiin iska hubi Halyeeyga PPC - waa baloog uu kafaala qaaday nin ila shaqeeya, Bariga bari. Iyaga ayaa ku takhasusay - waxaan ahay wadar cusub!
Jul 5, 2007 markay tahay 7:14 PM
Mahad Doug. Waan hubin doonaa…
Jul 6, 2007 markay ahayd 1:32 AM
Taasi waxay u egtahay wax aan caadi ahayn. Kama warqabin in Google AdWords uusan si otomaatig ah u shaandheynin bogga rasmiga ah ee xayeysiintu tilmaamayso.
Waad ku mahadsantahay dhajinta ku saabsan tan boggaaga! Waa inaan hubiyaa haddii aysan ku soo bandhigayn xayeysiiskayga bogagga shaqsiyadeed.